ရန်ကုန်မြို့မှ … အကြောင်းမလှသူများ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်မြို့မှ … အကြောင်းမလှသူများ ….
ရန်ကုန်မြို့မှ … အကြောင်းမလှသူများ ….
Posted by fatty on Nov 25, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
နာမည်က …. လေပြေတဲ့ …………..။
၁၀တန်း ဖြေပြီး တနှစ် ရှုံးပေါ့ …… အကြောင်းမလှတော့ အနှိပ်ခန်းရောက်နေလေရဲ့ …………။
နာမည်က ကြည်ပြာ တဲ့ …………… ECO ပထမနှစ် ….. အကြောင်းမလှတော့ အနှိပ်ခန်းရောက်နေလေရဲ့ …………။
နာမည်က ….ထားပါတော့ဗျာ ….ဒီလိုတွေ အများကြီးပေါ့နော ။ သိချင်ရင် COMMENT လေး တော့ ထားခဲ့ဗျာ … သူတို့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံပါ တင်ပြတာပေါ့ ။
တခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ….. ရေးသင့်မရေးသင့်နဲ့ …. သိချင်တဲ့သူရှိမရှိပါ ။
နောက်ပြီးပေါင်းရေးရမှာက ….မြန်မာပြည်မှာ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ …. stress တွေ ……..
comment က အရေးကြီးပါတယ်။ တောင်းဆိုမှု အရဘဲ ရေးဖြစ်မှာမို့ပါ ။
ကျွန်မအမြင်ကတော့ အနှိပ်ခန်းရောက်တဲ့ကိစ္စကတော့ မရေးသင့်ဘူးထင်ပါတယ် …
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေကတော့ သိသင့်ပါတယ် … အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေ ဗဟုသုတရတာပေါ့ ..
ဘာလို့မရေးသင့်ရမှာလဲ၊ ရေးသာရေး ဦဖက်၊ ဒါမျိုးစောင့်နေတာကြာပြီ။
ပရိုက်ဗေစီထိခိုက်နိုင်တာတွေဆို ..နာမယ်၊ လိပ်စာ ..စသဖြင့်တွေလွှဲပြီးရေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ ကုန်သည်။ အရောင်းမြင့်တင်ရေးသမား၊ အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေး၊ သူတောင်းစား၊ စသဖြင့် ..တဦးချင်းစီရဲ့ တိတိကျကျဇတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ သိသမျှ ရေးစေလိုပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်စာဖတ်သူတွေကလည်း သိသလောက်တွေ ပူးပေါင်းေ၇းပေးစေလိုပါတယ်..။မန္တလေးဂေဇက်အနေနဲ့လည်း ရထားပြီးသတင်းတွေ ပြန်တင်ပေးပါမယ်.။
အဓိက ဦးတည်ချင်တာက .. စီးပွားေ၇းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် .. ဘယ်သူတွေကောင်းစားသလဲ၊ ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်သလဲ။ ငွေကြေးလည်ပတ်မှုဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ ဘယ်ဖက်ကိုစီးဆင်းသွားစေသလဲ။ လူငယ်တွေဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ နယ်က ရွာက အလုပ်သမားတွေဘာဖြစ်သလဲ။ စသဖြင့် အခြေခံလူထုဖက်က ခံစားနေရတာတွေရဲ့ တင်ပြမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်စေချင်တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရော. မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရော လောလောလတ်လတ် သိပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်မယ် ယူဆလို့ပါ။
ယူအက်စ်က မြန်မာပြည်ကိုလုပ်ထားတဲ့.. ဆန်ရှင်ကိစ္စစဉ်းစားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တဲ့ စာတွေဆို မန္တလေးဂေဇက်က ပုံနှိပ်ဖို့ဝယ်ပါ့မယ်..။
ဒီလို အကြောင်းအရာလေးတွေကို – သိတဲ့ သူတွေရှိနေသလို မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေဦးမယ်ထင်ပါတယ် –
အဲ့တော့ ရေးတင်ထားတာရှိယင် ဖတ်မိတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း –
ဆောင်ရမယ့် ရှောင်ရမယ့် အခြေနေလေးတွေ ကို – ကိုယ်တိုင်ရွေးခြယ်နိုင်မှာပေါ့ –
ဒီတော့ရေးပါ အားပေးပါတယ် –
အဆင်မပြေတဲ့သူတွေများ အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင် အမည်လွှဲနေရပ်လွှဲနဲ့ရေးသင့်ပါတယ်။
ကာယကံရှင်ကိုထိခိုက်မှာစိုးတာရယ် ကြော်ငြာပေးသလိုလဲ ဖြစ်သွားမှာရယ်ကြောင့်ပါ။
အဖြစ်မှန်လေးတစ်ခု ကို မူတည်ပြီး ဖတ်ရသူတွေရင်ထဲမှာ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်လေးပေါက်သွားအောင် ရသမြောက်အောင်ရေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
တည်နေရာနဲ့ နာမည်ရင်းတွေတော့လွဲပီးရေးရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး နောက်လူတွေအတွက်သင်ခန်းစာရမယ်ထင်တာပဲ ရေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မျှော်နေပါမယ် ~~
တချို.ကျတော့ တကယ်ပဲ ဘာမှမတတ်နိင်လို. အနှိပ်ခန်းရောက်ကြရသလို …
တချို.ကျတော့လဲ အလွယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ …
အားပေးနေပါတယ် ရေးသာရေးပါ ကာယကံရှင်တွေမထိခိုက်အောင်တော့ရေးစေချင်ပါတယ်….
ပညာပေးတဲ့ အနေနဲ့ သာရေးပါ။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို အလွယ်လိုက်ရင် ဘဝနစ်မွန်းပြီး လူအထင်သေးခံရတတ်တယ် ဆိုတာမျိုးအနေနဲ့သာ ရေးပါ။ ရေရည်မှာ ဘဝကို အားမာန်နဲ့ တောင့်ခံပြီး ရပ်တည်ကြပါဆိုတာမျိုးလေးတွေပါရေးမှကောင်းမှာပါ။
ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဘာလုပ်နေပါတယ် ဆိုတာလောက်ကတော့ ထိခိုက်ရုံသက်သက်ဖြစ်မှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် သိသင့်ပါတယ် ။ နာမည်လေးလွှဲပြောရင်ပဲရပါပြီ ။
အခုနောက်ပိုင်း လွယ်လွယ် ပိုက်ဆံရပြီး အရင်းအနှီးပစ္စည်းဥစ္စာမလိုတဲ့ အလုပ်မျိုး တော်တော်လုပ်လာတာတွေ့တယ် ။ တစ်ချို့ ကြက်ပေါက်လေးတွေတောင် အိမ်တွေဖုန်းတွေနဲ့လေ ။ လူသာအထင်သေးတာ ပိုက်ဆံတော်တော်ဝင်တဲ့အလုပ်ပဲ
သာမန်အားဖြင့်တော့ … လိင်ကိစ္စဖျော်ဖြေမှုနဲ့ပြည့်တန်ဆာတွေကို ဥပဒေအရ တရားဝင်မလုပ်ထားရင် ဒီလိုအနှိပ်ခန်း၊ ကရာအိုကေခန်း၊ တည်းခိုခန်း၊ ပန်းခြံတွေမှာ စည်ကားအလုပ်များတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်..။
ဒါကို သေသေချာချာ ဒီဘိတ်လုပ်သင့်တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ .. လိင်ကိစ္စနှင့်ဆက်နွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ .. ဥပဒေအရတရားဝင် လုပ်သင့်-မလုပ်သင့်.။
သတိမူစရာ ဆင်ခြင်စရာ လူကြောင့်လား မူကြောင့်
ဒီပို.စ်ဟာ……ပညာပေးလဲမဟုတ်ဘူး ၊ သင်ခန်းစာလဲမဟုတ်ဘူး ၊ ကျုပ်ကတော့ကြော်ငြာတာလို.ပဲထင်တယ် …..
တင်ချင်တင်ပေါ့ဗျာ……မဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကကျော်ဖတ်သွားလိမ့်မယ် …စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့ဖတ်မှာပဲ ။
လောကမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတာ သိပ် မကောင်းဘူး ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ ရေးတယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ် .. သင်ခန်းစာ ယူရတာပေါ့ ..
ငါသိတဲ့ ကောင်မလေးက ဘယ်သူကွ .. မင်းတို့ ဆက်ချင်သလား ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူး .. ဒါကြောင့် နာမည်ရယ် .. နေရာရယ်ကို ထည့် မရေးပဲ .. သင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးပြမယ် ဆိုရင် ၀ဲကမ်းဘဲလို့ ဆိုပါရစေ ..
ကိုင် သို့မဟုတ် ခိုင် (အသံထွက် အမှန် မသိလို့ပါ) .. ရဲ့ ဒီဘိတ်ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ..
အခုဖြစ်နေတာက အိုးပင်းစီးကရက်လိုပဲ ရှိတာကို လူတိုင်း သိနေတယ် .. လှုပ်ရှားတဲ့ လူတွေကလဲ ဆက်ကြေး ပေးတယ် .. ဆက်ကြေးရတဲ့ လူတန်းစားကလဲ အထက်က မပြောမချင်း ငြိမ်စားနေတယ် .. အထက်က လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်မှ ထလာပြီး အဖမ်းပြတယ် .. သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် အခမဲ့ ၀င်စားနေကြလေ .. ဒီတော့ ထိုင်းမှာလို ဆေးစစ်ကပ်ပြားတွေ ထုတ်မပေးနိုင်တော့ ရောဂါတွေ ဖက်နေတဲ့ လူတွေ များလာ .. ဒီကြားထဲ .. ပျော်ချင်တဲ့လူတွေကလဲ ပလိန်းချည်း ဆိုတော့ .. ကြောက်စရာကြီးလေ .. ဒါကြောင့် ဒီဘိတ် လုပ်ရင်လဲ လမ်းမှန်မှန်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်